Confucius. Mabhuku nemitsara yekurangarira kuberekwa kwake | Zvazvino Zvinyorwa
Confucius. Mabhuku nemitsara yekurangarira kuberekwa kwake
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Bvunzo, Vanyori, Mabhuku
Confucius, muzivi wechiChinese uye anofunga zvakanyanya, akaberekwa ari Nyamavhuvhu 28, 551 BC C., kana ndiro zuva rave kutorwa pachivanhu. Saka nhasi ndinozvirangarira ne kusarudzwa kwe mabhuku nezvake uye nezvimwe zvake mashoko.
Este anofunga uye muzivi Kumabvazuva aive mwanakomana wemhuri yakaparara inokudzwa uye akazvipira kwakawanda kwehupenyu hwake mukudzidza uye kudzidziswa kwemitemo yetsika. Aya mazano nedzidziso akaunganidzwa nevadzidzi vake makore akati wandei mushure mekufa kwake akazopedzisira ave kuita chinozivikanwa nhasi seConfucius, pfungwa yakajairika ine mabhesheni aive pamusoro pekuregerera, kuremekedza, kuzvipira uye hunhu.
Aya ndiwo mamwe mabhuku nezve chimiro chake uye sarudzo yemitsara nepfungwa.
Muunganidzwa wemapfupi mitsara, madiki dialogues uye anecdotes yakaitwa nezvizvarwa zviviri zvevadzidzi kweanopfuura makore makumi manomwe nemashanu mushure mekufa kwake. Inotariswa semuenzaniso chete kwatinogona kuzviwana tiri Kuvhiringidzika zvakanyanya kukosha uye chaicho.
Hutungamiri maererano neConfucius - John Adair
John Adair ndiye wepasi rose chipangamazano pazvinhu zvehutungamiriri. Kune iri bhuku, iye anokwereta kubva kuConfucian uzivi nhevedzano yemitemo yepasirese iyo inopa makiyi ekuvandudza hunhu uye hunyanzvi hunofanirwa kuve nemutungamiri akanaka. Hutungamiri uhu, kushandisa iwo marongero aConfucius, anofanirwa kubudirira mukukurudzira nekukurudzira vashandi.
Mabhuku mana - Confucius
Ndiwo mabhuku mana, asina kunyorwa naConfucius pachake, asi anoumba iyo base uye kutanga kubva kuchikoro kwake, icho chinozivikanwa zvakare se "Chikoro cheMagweta". Ivo vanoratidza chiConfucius sechimiro chemagariro chemunhu, ane tsika inotsanangurwa ne kufanirala chinzvimbo and the basa, kungave mumhuri kana mukati meHurumende.
Iwo magwaro anoratidza kuti Chinese nhoroondo uye tsika hazvichakwanisike kunzwisiswa pasina dzidziso dzaConfucius.
Confucius chaiye - Annping Chin
Mune fomu biography nebhuku renhoroondo pane yakasarudzika China, iri zita rakapihwa sereferenzi yekuzadza mukaha mubhaibheri rinowanikwa muSpain, sezvo paine mashoma anobata nezvehupenyu nebasa raConfucius nenhoroondo yeChinese kubva panguva dzapakuvamba kwazvo.
Unofanira kugara uchidziisa musoro wako, moyo wako uchidziya uye ruoko rwako rwakareba.
Nhasi hazvifadzi kufambira mberi, asi kubudirira. Ini handitarisiri kuwana murume akakwana. Ndingagutsikana nekuwana murume ane chirevo. Asi zvinonetsa kuve nemisimboti munguva dzino kana pasina chinonyepedzera kuva chimwe chinhu uye chisina chinhu chichiita kunge chakazara.
Kuverenga tisina kufunga kunoita kuti tive nepfungwa dzakashata. Kufunga usingaverenge kunotitadzisa kusaenzana.
Iye asingazive chinonzi hupenyu, achaziva sei chinonzi rufu?
Murume haaedze kuzviona ari mumvura inoyerera, asi mumvura yakadzikama, nekuti izvo chete zvakadzikama pachezvazvo zvinogona kupa runyararo kune vamwe.
Muchinda wechokwadi ndiye anongoparidza zvaanoita.
Unondibvunza kuti sei ndichitenga sadza nemaruva? Ini ndinotenga mupunga wekurarama uye maruva kuti ndiwane chekuraramira.
Ndiye munhu anoita kuti chokwadi chive chikuru, uye kwete icho chokwadi chinoita kuti munhu ave mukuru.
Usaedze kudzima moto nemoto, kana kugadzirisa mafashama nemvura.
Izwi rakasimba harigone kukwikwidza nezwi rakajeka, kunyangwe iri zevezeve.
Kuziva izvo zvakanaka uye kusazviita ndiko kutya kwakanyanya.
Munhu akachenjera anotsvaga chaanoda mukati; vasina njere vanozvitsvaga kune vamwe.
Kwese kwaunoenda enda nemoyo wako wese.
Havasi vese varume vanogona kuve vanokudzwa, asi vanogona kuve vakanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Confucius. Mabhuku nemitsara yekurangarira kuberekwa kwake